Tsy miverina amin'ny ara-dalàna - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-03 mpandimby ny Magazine > Tsy hiverina amin'ny mahazatra
Rehefa nesoriko ny haingon-trano Krismasy, nofonosiko ary napetrako tao amin'ny toerana taloha izy ireo, hoy aho tamin'ny tenako fa afaka hiverina amin'ny fomba mahazatra aho. Na inona na inona izany. Raha vao nisy nilaza tamiko fa ny normalisation dia fampiasa fotsiny teo amin'ny fanasan-damba ary noheveriko fa marina ny ankamaroan'ny olona.
Tokony hiverina amin'ny ara-dalàna ve isika aorian'ny Krismasy? Azontsika atao ve ny miverina amin'ny toetrantsika taorian'ny niainany Jesosy? Ny nahaterahany dia mikasika antsika ny fahalehibiazana fa tonga eo amintsika Andriamanitra, rehefa nanolotra ny voninahiny sy ny toerany miaraka amin'ny Ray Izy hiaina tahaka ny olona toa antsika. Nihinana sy nisotro ary natory izy (Filipiana 2). Nataony zazakely marefo sy tsy afa-manoatra ny tenany ary niantehitra tamin'ny ray aman-dreniny mba hitarika azy soa aman-tsara amin'ny fahazazany.
Teo am-piasana izy dia nanome antsika ny sainy momba ny heriny amin'ny alàlan'ny fanasitranana ny olona, ​​mampitony ny ranomasina tafio-drivotra, manome sakafo ary manangana ny maty aza ny vahoaka. Nasehony antsika koa ny lafiny maha-fanahy sy be fitiavana azy amin'ny alàlan'ny fihaonana amin'ireo olona nolavin'ny fiaraha-monina miaraka amin'ny asa soa.
Tohina isika rehefa nandeha tamin’ny lalan’ny fijaliana, izay tamin-kerim-po sy nitokiany tamin-drainy mandra-pahafatiny teo amin’ny hazo fijaliana. Latsa-dranomaso aho rehefa mieritreritra ny fiahiana feno fitiavana ny reniny sy ny vavaka fangatahana famelan-keloka ho an’ireo tompon’andraikitra tamin’ny fahafatesany. Nandefa ny Fanahy Masina Izy hampahery sy hanampy ary hanentana antsika mandrakizay. Tsy namela antsika ho irery Izy ary mampionona sy mampahery antsika isan’andro ny fanatrehany. Miantso antsika ho eo aminy araka ny maha-izy antsika i Jesosy, saingy tsy tiany ny hijanonantsika amin’izany. Anisan’ny asan’ny Fanahy Masina ny manao antsika ho voary vaovao. Tsy tahaka ny naha-izy antsika talohan’ny nanavaozany antsika. In 2. Korintiana 5,17 Hoy izy io: “Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny taloha, indro, tonga ny vaovao.
Azontsika atao - ary olona maro no manao toy izany - manohy mieritreritra sy miaina aorian'ny mandre ny tantaran'i Jesosy miaraka amin'ny fanantenany fanantenana. Rehefa manao izany isika dia mety handà azy ny fidirana anaty ao am-pontsika, tsy misy hafa amin'ny hoe mety tsy hitadidy havana, na sakaiza, na koa ny vady tsy lavitry ny eritreritra sy fihetseham-pontsika anatiny. Azo atao ny manakana ny Fanahy Masina ary mitazona izany amin'ny halavirana. Avelany handeha izy fa tsy hametraka ny tenany amintsika.
Kanefa ny torohevitr’i Paoly ao amin’ny Romana 12,2 dia ny avelantsika hanova antsika amin'ny alalan'ny fanavaozana ny saintsika izany. Mety hitranga izany raha tsy manome ny fiainantsika manontolo ho an’Andriamanitra isika: ny torimaso, ny sakafo, ny fandehanana miasa, ny fiainana andavanandro. Ny fandraisana izay ataon’Andriamanitra ho antsika no tsara indrindra azontsika atao ho azy. Raha mitodika any aminy isika, dia miova avy ao anaty sy ivelany. Tsy toy ny fiaraha-monina manodidina antsika izay miezaka hatrany misintona antsika hidina ho amin’ny tsy fahamatorana, fa Andriamanitra dia mamoaka ny tsara indrindra ao anatintsika ary mampivelatra ny fahamatorana ao anatintsika.
Raha avelantsika hanova ny fiainantsika i Kristy, dia hitondrantsika tena toa an'i Peter sy i John izay nanaitra ny mpitondra, ny loholona, ​​ny manam-pahaizana tany Jerosalema sy ny vahoaka. Ireo lehilahy tsotra ireo dia nanjary mpiaro ny finoana matanjaka sy natoky tena satria niray saina tamin'i Jesosy tamin'ny fanahy (Asa 4). Ho azy ireo sy ho antsika, rehefa mifandray amin'ny fahasoavany isika dia tsy afaka miverina amin'ny ara-dalàna intsony.